Amathuluzi: idayimane sokuzivivinya
Omunye amaminerali sekukaningi kuyinto idayimane. Yingakho ukwelapha ezihlukahlukene izinto ngamandla okusezingeni eliphezulu, zisetshenziselwa idayimane sokuzivivinya ekhethekile. Basuke oluqanjwe ubuchwepheshe sintering, okuvumela ukuthola imikhiqizo Isidlulisilwazi.
Namuhla idayimane sokuprakthiza zingenziwa nge ezihlukahlukene nezinamathiselo: a cylindrical, eyindilinga, oyindilinga, nabanye abaningi. izinguqulo Hlukanisa lokhu ithuluzi asetshenziselwa ingilazi noma izitsha zobumba. Imibhobho esemzimbeni oyindilinga zenziwa, ngokuvamile ububanzi amamilimitha angu kusukela eyishumi nesithupha amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. Zisetshenziswa uma usebenza nge ingilazi ukugaya izimbobo. Ukumelana ukugqoka isimo thuluzi ezingaba yishumi nane amamitha, futhi itshe yemvelo - abayisishiyagalolunye nambili amamitha.
Amathuluzi yalolu hlobo angadingi Ukupholisa njalo futhi imimese ngesikhathi sokwenza umsebenzi. Okweqile bona kalula ongavikela ukucwiliswa gqwa esitsheni amanzi abandayo. Ngaphezu kwalokho, ngokukhuphula izinga lokushisa kule kahle lokusebenza ukusebenzisa encane isivinini ithuluzi ngokushintshana. Ngaphambi kokuba uqale, qinisekisa ukuthi esigxotsheni endaweni ye imishini oluzayo.
Modern idayimane sokuzivivinya ezenziwe, noma indlela powder yokusansimbi, noma Electroplating. Ukusetshenziswa yokugcina kusivumela ukukhiqiza amathuluzi ngokuphelele kunoma yikuphi ukucushwa, kodwa ngenxa ilungiselelo olulodwa-nomugqa okusanhlamvu, elinesimo degree kunalokho eliphansi ukuzinza imiphetho ebukhali. Indlela powder yokusansimbi inikeza kancane idayimane sokuprakthiza kokuba ngezinga eliphezulu kakhulu ukuqina. Nokho, usebenzisa le ndlela ungaveza kakhulu ezinkulu-ububanzi amathuluzi. Lokhu kungenxa yokuthi amandla adalwe design kudinga igebe phakathi okusanhlamvu idayimane, futhi ngo-osayizi ezincane sokuprakthiza lezi izikhala bayalingana usayizi okusanhlamvu, futhi ithuluzi uyogcina awe bhú phansi. Kromkostoykost lehla futhi ukusebenza yokusetshenziswa kwawo.
Ochwepheshe batusa usebenzisa idayimane sokuzivivinya lapho enza imisebenzi kakhulu, okuyiwona ukusetshenziswa bendabuko sokuzivivinya Carbide uhlobo noma okunzima. Futhi, leli thuluzi ngenkuthalo esetshenziswa ekuphileni kwansuku zonke, e ekukhiqizweni izibuko, phakathi kwenqubo itshe futhi ezihlukahlukene ukwakhiwa kanye ukufakwa kwemisebenzi. Ngokwesibonelo, evame kakhulu idayimane imishini emigodini ukhonkolo. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo amathuluzi asetshenziswa lapho esebenza ezahlukene ezikhethekile okuqinile, wayenza lukhuni Alloys, ingilazi futhi izitsha zobumba, kanye optical, ukubukela kanye nobucwebe izimboni. Kufanele futhi usho umsakazo electronics, Instrumentation, imishini, futhi zonke lezo zindawo lapho izimpahla ezisetshenziselwa okwamanje ubulukhuni okusezingeni eliphezulu. Kulokhu, kuphela idayimane sokuprakthiza isenzo apertures kahle sicubungula izindlela.
Scissors ukusika isitoreji utshani: Izici
": Ekuqaleni Sokuphela esiqalekisweni" movie. Izibuyekezo hhayi umusho
Salad "Okujwayelekile": zokupheka inkukhu, inyama kanye nemifino nge
Izilwane UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki: Wild